Mabhenefiti eKutumira meseji muBhizinesi
A mobile billboard rori inzira yakanaka yekushambadza muBoston nemamwe maguta. Vanhu vazhinji vanopedza anenge maawa gumi nemashanu pasvondo vari mumotokari yavo. Vangave vari kutyaira kana kugara pachigaro chevatambi, vanoratidzirwa kune akasiyana ma brand uye meseji. Nekutevera GPS, rori inoshambadzira bhero inogona kurondwa uye kudzokororwa nenzira kwayo. Kuendesa kunze kwekutyaira kune kambani ine mutyairi ane ruzivo kunogona kupa nhare mbozha hupenyu hwechipiri uye kuunza imwe mari kumushambadzi.
Imwe bhenefiti yekuve nemobile billboard rori ndiko kuwedzera kuratidzwa kwainowana. Nekuda kwehukuru hwayo, inoonekwa kubva mumugwagwa uye inogona kubata maziso evatyairi. Kusiyana nekushambadzira kwechinyakare, izvi zvinoreva kuti mobile billboard inozoonekwa nevatyairi vakasiyana siyana. Kubatsira kukuru kwerori yebhillboard inofambiswa kugona kwayo kukwezva pfungwa dzevanopfuura. Zvisinei, rudzi urwu rwekushambadza haruna kukurudzirwa kumakambani enguva pfupi. Kune mishandirapamwe yenguva pfupi, zviri nani kuomerera pamushandirapamwe wenguva refu senge mwedzi-yakareba kana gore.
Rori inoshambadzira bhodhi inogona kukubatsira kusimudzira mhando yako munzvimbo yakanangwa uye panguva imwechete ichionekwa nevanhu vazhinji. Ivo zvakare vakakwana kune zviitiko uye makuru kuvhurwa. Mushandirapamwe unogona kugara kubva pamazuva mashoma kusvika kumwedzi yakati wandei uye unogona kureba semwedzi mishoma. Nekuda kwekuti anogona kuonekwa nevanhu vazhinji, mabhodhi emafoni anoshanda zvakanyanya pakuita kuti vanhu vatarise. Pamusoro pekukwezva kutariswa, nharembozha mabhodhi zvakare ane mutengo wakaderera uye ane yakakura kusvika.
Rori inoshambadzira bhodhi ine mukana wakawedzerwa wekuonekwa zvakanyanya, kunyanya zvichienzaniswa nemabhodhi emazuva ese. Kuonekwa kwepamusoro kwemabhodhi aya ndiyo kiyi yemushandirapamwe unobudirira, uye nerori yerudyi yebhillboard rori, unogona kucherechedzwa uye nekuwedzera ROI yako. Uye nemushandirapamwe wakakodzera, unogona kuburitsa huwandu hwakakosha hwekutungamira. Kunyanya kuratidzwa bhodhi rako renharembozha, zvinoita kuti vanhu vasarudze mhando yako.
Rori inoshambadzira bhodhi inogona kuoneka kubva chero kupi, zvinoreva kuti inoshanda zvakanyanya pakukwezva kutarisa. Inonyanya kushanda munzvimbo dzine vanhu vakawanda, dzakadai senzvimbo dzinotakura vanhu. Izvi zvinoreva kuti inogona kuonekwa kubva chero kupi zvako. KuBoston, zvakakosha kuti utumire rori yebhidhibhodhi inofambiswa kunzvimbo dzakakwirira dzinenge dzichingo pfuura nevanhu. Munguva yechando, zvinonyanya kukosha kutyaira munzvimbo idzi kukwezva kutarisisa.
Rori inoshambadzira bhodhi chishandiso chakanakisa kushambadza mhando yako. Motokari idzi dzinogona kuwanikwa mumigwagwa ine vanhu vakawanda kana kumaruwa. Rori inoshambadzira bhodhi inogona kushandiswa nenzira dzakasiyana siyana. Mamwe makambani anoashandisa kusimudzira zvigadzirwa kana masevhisi avo. Vamwe vanoashandisa kuita maparade uye kuratidza fenicha. Rori inotakura bhodhi inogona kutakura chero chinhu. Kazhinji kazhinji, rori inoshandiswa kune zvinangwa zvakawanda. Bhizinesi diki rinogona kunge riine bhodhi renhare munzvimbo yeruzhinji kwevhiki uye rive nechiitiko chakazara.
Rori inoshambadzira bhodhi inzira yakanaka yekushambadza. Marori anogona kuonekwa nevanhu pavanenge vachityaira, vachikwira zvifambiso zvevoruzhinji, kana kunyange panguva dzezviitwa zvekusimudzira. Rori inoshambadzira bhodhi inzira huru yekuwedzera kuoneka muguta rako uye kusvika kune vakawanda vateereri munguva pfupi. Kune zvakare mamwe akawanda mabhenefiti ekushandisa nhare bhodhi rori mubhizinesi rako. Iwe unogona kugadzira buzz kutenderedza chero chiitiko kana kukwidziridzwa. Muganho chete ndiwo fungidziro yako.
Rori inofambiswa yebhillboard inogona kushandiswa pakushambadzira. A mobile billboard inogona kushandiswa kune zvakasiyana siyana. Inogona kuiswa munzvimbo ipi neipi yeruzhinji iyo inogona kuonekwa. Rori inofambiswa yebhillboard inogona kushandiswa kushambadza bhizinesi rako. Bhizinesi rine mobile billboard rori rinogona kuburitsa shoko pamusoro pezvigadzirwa kana masevhisi ako. Muchokwadi, rori inofambiswa yemabhiribhodhi inogona kusvika kunzvimbo dzinowanzove vanhu.
Rori inoshambadzira bhodhi ine zvakawanda zvakanaka zvebhizinesi rako. Kuvapo kwayo kunokwezva kutarisisa kupfuura chero imwe nzira yekunze yekushambadzira. Iwe uchagamuchira 98 muzana yekutariswa kwevanhu vari mumotokari, uye mhando yako inozoonekwa zvakanyanya. Pamusoro pekuonekwa kwayo, mabhodhi enharembozha anewo mari yakawanda. Mutengo wemobile billboard rori unoenderana nenzvimbo yaunosarudza. Asi zvakakodzera mari. Rori inochengetedzwa zvakanaka ino wedzera kuoneka kwerudzi rwako.
by SND Team 7 maawa apfuura 4 maawa apfuura